Qalabka Qalabka, Qalabyada, Isku dhafka Nidaamka dareeraha - CIR-LOK
Tuubooyinka iyo Tuubooyinka dabacsan
Tusaalaha Silinders iyo Dheriga Condensate
Cabbirka Cadaadiska Wareegyada Wareegga ee Meesha Kala beddeli karo iyo Sifonnada
Alaabooyinka Nadiifinta Sare
Cadaadiska Sare ee aadka u sarreeya
Qalabka iyo Agabka
Guddiga gaarka ah
Ku saabsan CIR-LOK
Shirkaddu hadda waxay u kortay shirkad caalami ah oo naqshadaysa, horumarisa, soona saarta kumanaan alaab iyo adeegyo tayo sare leh. Kooxda farsamadu waxay soo ururiyeen khibrad badan oo ku saabsan warshadaha sida korontada, Petrochemical, gaaska dabiiciga ah iyo warshadaha semiconductor.
Dhammaan alaabooyinka CIR-LOK waxay ku xiran yihiin hababka maaraynta hubinta tayada adag iyada oo loo marayo dhammaan heerarka habaynta, naqshadaynta, soo saarista, tijaabinta iyo caddaynta si loo hubiyo in shuruudahan muhiimka ah ee macaamiisha la buuxiyey.
Markaan nahay CIR-LOK, waxaan ku dadaaleynaa qancinta macaamiishayada. Weydiimahaaga waxa lagugu soo jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood. Kooxdayadu waxay wataan shaqaale aqoon u leh si ay si degdeg ah uga jawaabaan su'aalahaaga. Gaadhida degdega ah ayaa fure u ah guushaada.
Hadafka gardarada ah ee CIR-LOK waa inaan nafteena ka dhigno hogaamiye warshadeed oo aan ballaarino saamiga suuqa Tan waxaa lagu ilaaliyaa waax kasta oo ka tirsan ururka. Dadaalkeena guud waxa uu ilaalin doonaa luminta taabashada shakhsi ahaaneed ee ka dhigaysa ganacsigeena mid lagu raaxaysto oo barwaaqo u ah dhammaan kuwa ku lug leh.
Qalab kala duwan
Valves Relief Proportional Relief
Qalabyada Twin ferrule Tube
Qalabka Tuubooyinka Qalabka
Qalabka alxanka ee Qalabka
Gaaska Birta ee Xidhmada Wajiga
Qalabyada Dabada-Alxanka yar
Valveska badda hoosteeda
Valves Cadaadis Hoose, Qalabyada iyo Tuubooyinka
Walxaha Cadaadiska Sare ee aadka u sarreeya, Qalabyada iyo Tuubooyinka
Valves Cadaadis Dhexdhexaad ah, Qalabyada iyo Tuubooyinka
Nidaamiyeyaasha Cadaadiska Dhabarka
Nidaamiyeyaasha Yaraynta Cadaadiska